Ekwentị: 86-510-87976997/0086 13861515998
Ụlọ ọrụ Yixing Cleanwater Chemicals Co., Ltd.
Onye na -achọ mmiri
N'oge na -adịbeghị anya, ụlọ ọrụ anyị nwere ọrụ nkwalite Septemba wee wepụta mmemme ọkacha mmasị ndị a: Enwere ike zụta Onye na -achọ mmiri na PAM ọnụ na nnukwu ego. E nwere isi ihe abụọ dị iche iche nke ndị na-ahụ maka ihe nchacha ahụ na ụlọ ọrụ anyị.Onye na-ahụ maka mmiri na-achọ mmiri CW-08 bụ nke a na-ejikarị iji t ...
Mgbasa ozi ndụ Septemba na -abịa!
Mgbasa ozi dị ndụ nke Ememe Ịzụta September na -agụnyekarị iwebata kemịkalụ ọgwụgwọ mmiri mkpofu na nnwale mkpocha mmiri. Oge ndụ bụ 9: 00-11: 00 am (CN Standard Time) Sept.2,2021, nke a bụ njikọ anyị dị ndụ https://watch.alibaba.com/v/785bf2f8-afcc-4eaa-bcdf-57930. ..
DADMAC bụ onye inyeaka kemịkalụ maka ọgwụgwọ mmiri mkpofu ụlọ ọrụ
Ndewo, nke a bụ ụlọ ọrụ na -emepụta kemịkalụ dị ọcha sitere na China, ihe anyị na -elekwasị anya bụ imezi mmiri nsị. Ka m webata otu ngwaahịa ụlọ ọrụ anyị-DADMAC. DADMAC bụ ịdị ọcha dị elu, nchịkọta, nnu ammonium quaternary na cationic monomer nwere nnukwu njupụta. Ọdịdị ya bụ col ...
Ọmụmụ ihe na Heavy Metal Remove Agent
Taa, anyị haziri nzukọ mmụta ngwaahịa. Ọmụmụ ihe a bụ maka ngwaahịa ụlọ ọrụ anyị akpọrọ Heavy Metal Remove Agent. Kedu ụdị ihe ijuanya ngwaahịa a nwere? Cleanwat cW-15 bụ ihe na-adịghị egbu egbu na ihe na-emetụta gburugburu ebe obibi. Chemical a nwere ike mepụta co ...
Onye na -ese ihe na -ese ihe na -ese ihe na China
A na -eji coagulant dị ọcha maka igwe ojii agba (agba anwụrụ agba) maka ịsacha mmiri mmiri. Ọ mejupụtara onye nnọchi anya A & B. onye nnọchi anya A bụ otu ụdị kemịkalụ ọgwụgwọ pụrụ iche ejiri were wepụ viscosity nke agba. Ihe mejupụtara A bụ organic polymer. Mgbe agbakwunyere n'ime mmiri recircu ...
Anyị nwere ike ịnye ngwaahịa dị elu, ọnụahịa asọmpi na ọrụ ndị ahịa kacha mma. Ebe anyị na -aga bụ “Ị ji nsogbu bịa ebe a, anyị na -enye gị mmụmụ ọchị ka ị wepu ya” Maka 2019 ọhụrụ china poly dadmac maka ọgwụgwọ mmiri na kemịkalụ akwụkwọ, nabata atụmanya ụwa niile iji nweta ...
Otu esi ahọrọ Polyaluminum chloride na ọgwụgwọ mmiri
Kedu ihe bụ polyaluminum chloride? Polyaluminum chloride (Poly aluminum chloride) adịghị PAC. Ọ bụ ụdị kemịkal ọgwụgwọ mmiri maka mmiri ọ drinkingụ drinkingụ, mmiri ụlọ ọrụ, mmiri mkpofu, nsacha mmiri dị n'ime ala maka iwepu agba, iwepụ COD, wdg site na mmeghachi omume.
Ọmụmụ ihe ọmụmụ na agba alụlụ flocculant
N'oge na -adịbeghị anya, anyị ahazila nzukọ nkekọrịta mmụta, nke anyị jiri nyocha nke ọma mụọ ihe na -ese anwụrụ ọkụ na ngwaahịa ndị ọzọ. Onye ọ bụla na -ere ahịa nọ ebe ahụ gere ntị nke ọma wee detuo, na -ekwu na ha eritela nnukwu uru. Ka m nye gị nkọwa dị mkpirikpi maka ngwaahịa mmiri dị ọcha —— C ...
Nlele nke June Nnukwu Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi Ọhụrụ
site na nchịkwa na 21-06-15
Ndewo onye ọ bụla, nke a na -amịpụta mmiri kemịkal dị ọcha. ltd. Na June 21, 2021, site n'elekere 9 nke ụtụtụ ruo elekere 11 nke ụtụtụ China, anyị ga -enwe ọmarịcha mgbasa ozi. Isiokwu mgbasa ozi anyị na -ekwu maka nnukwu nkwalite na June. Onye na -emepụta kemịkalụ na -enweta nnukwu uru.Onye na -ahụ maka mmiri na -achọ mmiri + PAM = Mwepụ ego ọzọ ...
dị ọcha wat polyamine wholesale
Ngwaahịa a bụ polymers cationic polymer nke ịdị arọ molekul dị iche iche nke na-arụ ọrụ nke ọma dị ka ndị isi coagulants ma na-ana ndị ọrụ nnọpụiche na usoro nkewa mmiri siri ike n'ọtụtụ ụlọ ọrụ. A na -eji ya maka ịgwọ mmiri na igwe igwe. A na -ejikarị ya na follo ...
cleanwat na -ezitere gị akwụkwọ ịkpọ oku - ihe ngosi mmiri mmiri nke 14 nke Shanghai
Na June 2, 2021, emechiri ememme ngosi mmiri mmiri nke 14 nke Shanghai. Adreesị ahụ dị na Shanghai National Convention and Exhibition Center. Nọmba ụlọ ntu nke ụlọ ọrụ anyị—— Yixing Cleanwater Chemicals Co., Ltd. bụ 7.1H583. Anyị ji ezi obi na -akpọ gị òkù isonye. The ngwaahịa ex ...
Mwepụta Ngwaahịa Ọhụrụ - Ezigbo Ahịa na Defoamer Ogo
1. Ihe defoamer bụ polysiloxane, polysiloxane gbanwetụrụ, resin silicone, black carbon black, onye na -achụsasị ya na ihe na -akwalite ya, wdg. 2. Na mkpokọta dị ala, ọ nwere ike idobe mmetụta iwepu afụ nke ọma. 3. Ọrụ mmechi ụfụfụ pụtara 4. Easi ...